प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा मात्रै दर्जन परियोजना! spacekhabar
प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा मात्रै दर्जन परियोजना!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा करिब एक दर्जन ठूला विकास कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन हुँदै छन्। एउटै परियोजना १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको छ। केही परियोजनामा काम धमाधम भइरहेको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन्।
१५ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा बुद्धमूर्त निर्माण गर्न लागिएको हो। यसका लागि १२ कट्ठा जमिन प्राप्त भइसकेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले जानकारी दिए।
यसैगरी ३ अर्बको भ्यु टावर, २ अर्बको सडक, २ अर्बको विज्ञान पार्क, १ अर्ब ३७ करोड पुल, २९ करोड सभागृह, १५ करोडको पशुपन्छी बजार र १ करोड २५ लाखको नमुना मार्गजस्ता कार्यक्रमम दमकैमै छन्। कान्तिपुरमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, ०६:४९:००